Waxyaabaha Soomaalidu ku Qiimayso Af-miishaarnimada – W/Q: Cali Cabdi Coomay | Somaliland Post
Home Maqaallo Waxyaabaha Soomaalidu ku Qiimayso Af-miishaarnimada – W/Q: Cali Cabdi Coomay
Waxyaabaha Soomaalidu ku Qiimayso Af-miishaarnimada – W/Q: Cali Cabdi Coomay
Dadyowga ilaahay abuuray ma sina, sida faraheenu oo kale, qaarba waa cayn gaar ah. Midbaa aqoon leh, midbaa jaahil ah, midbaa maskax fiican leh, midbaaa maan-gaab ah, midbaa xubinta hadalka yaqaan, midbaa munaafaqada xariif ku ah, midbaa beenta iyo huuhaada ku xeel dheer, midbaa iska hor-keenka ku talaxtagay, midbaa cayda iyo shakhsi weerarka ku takhsuusay, midbaa qabyaalad-cayga dugsi uga soo baxay IWM. Af-miishaarnimadu kuma xidhna gabayo iyo maahmaaho la tiriyo, balse waxay ku xidhan tahay hadalo iyo erayo xigmad iyo wax-fahansiin xambaarsan.
Af-miishaarnimadu meel kasta way gashaa, laakiin waa hadba siduu qofku u adeegsado. Waxaad bulshada ku dhex arkaysaa qaybo badan oo aftahnnimo ah. Sida Kuwan oo kale: wadaad aftahan ah, siyaasi aftahan ah, aqoonyahan aftahan ah, tuug aftahan ah, qabyaaladiiste aftahan ah, budhcad aftahan ah, suldaan aftahan ah, macallin aftahan ah, caaqil aftahan ah, jaadle aftahan ah, kaari aftahan ah, weriye aftahan ah, hilible aftahan ah, ganacsade aftahan ah, dirawal aftahan ah, xamaal aftahan ah, arday aftahan ah IWM.
Waxyaabaha lagu qiimeeyo af-miishaarnimada
1. Mar kastuu hadlayo, wuu qodobeeyaa hadalkiisa. Waanu soo koobaa, isagoo ujeedadii taabanaya.
2. Mar kasta wuxuu noqda qof mowduuci ah, kama baxo mowduuca laga hadlayo. Mana dar-jiidho
3. Mar kastuu sheekaynayo, wuxuu ku daraa sheekooyin xiiso leh, oo xidhiidh la leh mowduuca uu ka hadlayo
4. Mar kasta oo uu khudbad jeedinayo, wuxuu ku bilaabaa waxaanay kuwuu ka horeeyey ku bilaabin
5. Mar kasta oo sheekaynayo, wuxuu ku ladhaa hadalkiisa maahmaah, xigmad amma tix gabay ah, oo xawaasha iyo geedo u noqota hadalka
6. Mar kasta wuxuu u hadlaa si furfuran, oo ay ka muuqato, kalsooni. Tusaale kasta oo soo qaato waa lagu qoslaa amma sacab badan ayaa loo tumaa
7. Mar kasta hadalkiisu ma badna, waayo hadalka farah badani wuxuu lumiyaa xigmada iyo macnaha
8. Mar kasta erayada xigmada xambaarsan meel fog kama doono, wuxuu ka soo qabtaa meel dhaw
9. Mar kasta wuxuu la fadhiistaa odayaasha ka weyn, si uu uga barto taariikhdii hore iyo dhacdooyinkii dhaqan ee dadkii hore lahaaheen, si uu tusaale ugu soo qaato markuu hadlayo.
10. Mar kasta hadalkiisu waa rimood, uu qofku doono ku kaxeeyo amma mawqifka uu wato kaga dhaadhiciyo. Isagoo adeegsanaya erayada beerlaxawsiga ah
11. Mar kasta ciduu la hadlayo, ayuu sii baadhaa, waxay jecel yihiin inay maqlaan ayuu hadalkiisa ku badiyaa, si dadku ugu soo joogsadaan.